वेद भनेको बाहुनले पूजा गरेर दक्षिणा थाप्ने किताब होइन । र नेपाल वेदभूमि हो भनेरमात्र पुग्दैन, - Sanibar News
वेद भनेको बाहुनले पूजा गरेर दक्षिणा थाप्ने किताब होइन । र नेपाल वेदभूमि हो भनेरमात्र पुग्दैन,
Is it our indigenous knowledge?
वेद भनेको बाहुनले पूजा गरेर दक्षिणा थाप्ने किताब होइन । र
नेपाल वेदभूमि हो भनेरमात्र पुग्दैन,
वैदिक शिक्षालाई व्यवहारमा परिणत गर्न पहल गर्नु पर्छ । परिणत गर्न सक्नु पर्छ (अर्थात इतिहास, संस्कृति, शिक्षा, गणित, राजनीति, अर्थशास्त्र जस्ता विषयको पाठ्यक्रममा वेद अटाउनु पर्छ )।
Inclusive Democracy in Veda
वेदमा समावेशी लोकतन्त्र
ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं, सं वो मनांसि जानताम् । समानो मन्त्र: समिति: समानी, समानं मन: सहचित्तमेषाम् । समानी व आकूति: समाना हृदयानि व: | समानमस्तु वो मनो यथा व: सुसहासति || (ऋग्वेद १० – १९१-३-४)
सँगै हिँडौँ, सँगै बोलौँ । हामी सबै एक मन हुन सकौँ । प्रियजनहरू यस प्रकारको एकताको निर्माण गर्न पहल गरौँ । हाम्रो उद्देश्य साझा होस् । आशय र आचरण समान होस्, सङ्घ (राजनीतिक एकाइ) साझा होस् । समान उद्देश्यले हामीलाई एकतावद्ध गर्दछ । मिलेर बसौँ, मिलेर बोलौँ, मिलेर बाँचौँ, यहाँसम्म कि हाम्रो हृदयको अभिलाषासमेत साझा होस्, जहाँ सबैको लागि सामान्य स्थितिको निर्माण होस् ।
वैदिक राष्ट्र गान
ओ३म् ! आ ब्रह्मन् ब्राह्म॒णो ब्रह्मवर्च॒सी जायता॒म रा॒ष्ट्रे राज॒न्यः शूरऽइष॒व्यो॒ऽतिव्या॒धी महार॒थो जायतां॒ दोग्ध्री धे॒नुर्वोढान॒ङ्वाना॒शुः सप्ति॒: पुरन्धि॒र्योषा जि॒ष्णू रथे॒ष्ठाः स॒भेयो॒ युवास्य यजमानस्य वी॒रो जायतां निका॒मेनिकामे नः प॒र्जन्यो॑ वर्षतु॒ फलवत्यो न॒ऽओष॑धयः पच्यन्तां योगक्षे॒मो नः॑ कल्पताम् (यजुर्वेद २२/२२)
हे शृष्टिकर्ता परम् ब्रह्मा, प्रकृतिका मालिक !
हाम्रो देश आदर्श राष्ट्रको रूपमा रहोस् । ब्रह्मतेजले युक्त शिक्षक (ब्राह्मण) होऊन् । शस्त्रास्त चलाउन जान्ने, सूरविर प्रशासक (क्षत्रीय) होऊन् । शत्रु पराजय गर्न सक्ने महारथीहरू भएको सेना होस् । प्रशस्त दूध दिने गाई होऊन् । देशका नागरिकहरू स्वस्थ हृष्टपुष्ट र बलिष्ठ होऊन् । प्रशस्त भार उठाउन सक्ने गोरू, चाँडो कुद्न सक्ने घोडा होऊन् । स्त्री वा महिलाहरूले गाउँ र नगरको निगरानी गरून् अर्थात महिला प्रहरीले गाउँ र नगरको रक्षा गरून् । हाम्रो उदीयमान राष्ट्रमा कुशल युवक (नेता, सभासद) ले सभा (प्रतिनिधि सभा, संसद) सञ्चालन गरून् । आवश्यकता अनुसार वर्षा होस् । वनस्पतिमा औषधी फलोस् फल औषधि भएर पाकोस् । प्राप्त वस्तुको रक्षण होस् र अप्राप्त वस्तु प्राप्त होस् । हाम्रो राष्ट्र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने योगक्षेमकारी राष्ट्र होस् ।
(अनुवाद नमिलेको भए गल्ति सच्याउने मौका माग्दै विद्वानहरूबाट सुझाव चाहन्छु)
Previous माओवादीको झण्डामा कांग्रेसका चार तारा !
Next महिलामाथि हुने िहंसा न्यूनीकरणका लागि संचारमाध्यमको भूमिका : मिडिया-प्रभाव अनुसन्धानको दृष्टिबिन्दुबाट